I-Cocktail Movie Hindi: Yijonge kwi-Intanethi simahla- XperimentalHamid
I-Cocktail Movie Hindi: Yijonge kwi-Intanethi simahla
Oktobha 5, 2020 by USasha Gohar
Ukuba ukhangela imovie elungileyo neyonwabisayo ye-Bollywood movie, ndiza kukucebisa ukuba ubukele i-Cocktail Movie. Kuya kufuneka ukuba ucinga ukuba kutheni ndicebisa le? Yintoni le ikhetheke kangaka ngayo?
Esona sizathu siphambili kukuba yimiboniso bhanyabhanya yothando eya kuthi ikhanyise imeko yakho.
Ibali eliphambili lijolise kubahlobo abathathu uGautam-udlala ngothando (Saif Ali Khan), uVeronica- isityebi nentombazana entle eyonakeleyo (uDeepika Padukone) kunye noMeera- uSimpleton (uDiana Penty).
Ibali lisekwe kunxantathu wothando phakathi kwezi zintathu. I-cocktail yaseHomi Adajania ye-movie yahluthwa kwiindawo ezahlukeneyo zaseLondon, eKapa naseNew Dehli.
Ifilimu yakhutshwa ngo-2012 eyayikhokelwa nguHomi Adajania. Yaveliswa nguSaif Ali Khan kunye noDinash Vijan. Lo mboniso bhanya-bhanya ufumene i-1257 yezigidi kwibhokisi yeofisi.
Ukuhlaziywa kweCaintail yeHindi
Ibali le-Cocktail elibhalwe ngu-Imtiaz Ali limalunga noGautam ongena kubudlelwane nentombazana eshushu nesisityebi, uVeronica. UVeronica uzibiza njenge-bitch etyebileyo kwaye usela kakhulu.
Kwelinye icala, uMeera uyintombazana endala, enxibe u-shalwar qameez, onokupheka athandaze. Uvela eIndiya wazohlala nomyeni wakhe ohlala eLondon.
Ekuqaleni kwebali, ufumanisa ukuba umyeni wakhe umkhohlisile kwaye akazimisele ukumthatha ahambe naye. UMeera uziva engenakuzinceda kwaye ekwimeko emaxongo xa edibana noVeronica okokuqala.
UVeronica ufumana uMeera kwikhaya lakhe kwaye ekuhambeni kwexesha baba ngabahlobo abasenyongweni. Umsa endaweni yakhe emva koko wamazisa eGautam. Bobathathu bahlala phantsi kophahla olunye, kunye nendalo echaseneyo neendlela, baba ngabahlobo.
UVeronica kunye noGautam bonwabile kuba abakho kuhlobo lokuzibophelela kulwalamano. Enye into enomdla ngale bhanyabhanya kukuba ubuhlobo phakathi kukaMeera noVeronica bufakwe ngendlela eyiyo.
Kwisiqingatha sesibini sefilimu, imovie iyajikela kwinqanaba elibi. Ukusebenza kwazo zonke ezi ndima zintathu zikhokelayo kuxabiseke ngokwenene. Ekuqaleni bonke bonwabile kodwa ubomi babo buba nzima xa uGautam esiwa Meera.
Ukusebenza kuka-Deepika njenge-bitch esisityebi kunye nentliziyo ethambileyo kubalasele kuyo yonke imovie. Yenye yeendlela zakhe ezilungileyo kwimveliso yefilimu yaseHollywood. Ukusebenza kwakhe kuye kwaba nomtsalane kakhulu kwaye wenze okusesikweni ngokupheleleyo ngomlinganiswa "uVeronica".
UDiana Penty wenza isidima kwisenzo sakhe sokuqala.
Umculo weCocktail yoMculo
Umculo wale bhanyabhanya ubetha kakhulu. Tum hi ho bandhu kwaye idaaru desi zezona ngoma zibalaseleyo nezithandwayo; Ngelixa ezinye iingoma ezimbini yariyaan kwaye jugni inoxolo kwaye inomphefumlo.
Umculo wale bhanyabhanya waqulunqwa ngu-Honey Singh, Neha Kakkar, Pritam Chakrabortaly kunye noSalim-Sulaiman
Ikwaquka nezinye iingoma ezibethwayo
Umdlalo bhanyabhanya opheleleyo
Bukela kwi-IntanethiI-cocktail ngumdlalo obukelekayo xa ufuna ukukhanyisa imeko yakho. Ungayibukela simahla kwi-intanethi ngalo naliphi na ixesha naphi na. Apha ndiza kwabelana ngefilimu egcweleyo kunye nawe ukonga ixesha lakho.
Apha ungafunda malunga ne-aslo I-LockUp Umboniso bhanya-bhanya
I-Cocktail yakhululwa ngo-2012 njenge-blockbuster movie. Le bhanyabhanya yothando yathandwa kakhulu ngabaphulaphuli ngohlaziyo oluqinisekileyo. Iinkwenkwezi uSaif Ali Khan, u-Deepika Padukone, kunye noDiana baninzi kwiindima eziphambili.
Ukusebenza kukaDeepika kwakubalasele. UDiana noDeepika baphumelele amabhaso ahlukeneyo kule bhanyabhanya.
Ukuba ufuna ukuyibukela kwi-intanethi. Ndibonelele ngekhonkco. Ungayibukela simahla apha. Yonwaba!
iindidi bhanya, Reviews tags I-Cocktail Full Movie kwi-Intanethi, Ukuhlaziywa kweMiboniso bhanyabhanya yeCocktail
Joyina amanye ama-25,142 ababhalisile